အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: အတိတ်ခရီးသို. ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်မိသောအခါ ၃
... 11:20:00 AM
နောက်ဆုံး စာကြောင်းလေးကို အထူးလက်ခံပါတယ်။
ဟဟဟ အမှား၇ှာတွေ့တယ် သတိ၇တာ နော် သတိယ တာဟုတ်ဘူး ဟိဟိ ပျော်၇ွှင်စွာနဲ့ အမှားထောက်ပြသွားတယ်နော် ခိခိ အဲဒါ သေချာဖတ်သွားလုိ့ သိတာနော် ဟဟဟဟ တာ့တာ ဘိုင်
18 June 2009 at 8:43 PM
“တကယ်ကို တစ်ယောက်မှ အတူတူ မပါလာခဲ့တော့”
အလယ်တန်းကသူတွေမပါရင် အထက်တန်းက သူတွေ ပါအောင်ခေါ်ပေါ့ဗျာ...
အထက်တန်းက သူတွေမပါရင် တက္ကသိုလ်က သူတွေ ပါအောင်ခေါ်ပေါ့ဗျာ...
တက္ကသိုလ်က သူတွေမှ မပါသေးရင် အခုအနားမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေကို မပါ ပါအောင်ခေါ်ပေါ့ဗျာ...
18 June 2009 at 11:12 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုခမ်းရေ မျှဝေခံစားပေးလို.
မယ်ကိုးရေ မြင်တာလေးတွေ ပြောအုံးလေ(ရစ်တာ)
နေခြည်ရယ် "ဗေဒင်ဆရာသာ ပိုသိနိုင်မလား " ဗဒင်သိချင်းလေ
ကိုယုယရေ လာပါမယ် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေါ့ဗျာ ....
ဘယ်ကိုခေါ်ချင်တာလဲဆိုတာ မကြာမီလာမည်မျှော်ပေါ့ ဗျာ
လေဆိပ်က ဆိုင်းပုဒ်ကိုပြောတာနော် ဟာဟ
19 June 2009 at 2:27 PM
အဖြူအစိမ်းဘဝမှာ သိပ်မကွဲသေးဘူး...ဆယ်တန်းနောက်ပိုင်းမှာ တဖြေးဖြေး ဝေးသွားကြတယ်...။
ပဲများတတ်စ ကျောင်းသူဖြူဖြူစိမ်းစိမ်းလေးတွေ တောင်ပြန်လွမ်းသွားတယ်..